Vases maka ogige aka ha
Ụlọ Aka aka gị
Ndị na-akọ ubi na-echesi ike na ụbọchị okpomọkụ ga-amalite ịme atụmatụ ha. Umu ahihia ornamental na nke a abughi ebe ikpeazu. Ihe na-eme nke ọma na ite dị iche iche nwere ike ịgbanwe mpaghara ebe ndị dịpụrụ adịpụ na-agaghị emeli.
The plastic na-emebu ma ọ bụ iko iko adịghị anya mbụ. Tụkwasị na nke a, enweghi ohere ọ bụla iji lelee saịtị ahụ na elekere anya, obere ogwe mara mma na-adọta ndị na-adịghị ehulata iji dọkpụrụ ya na saịtị ha. Ka ị ghara ịnwa ndị ohi ma ghara ịnapụ onwe ha ohere iji chọọ okooko osisi na ogige osisi maka okooko osisi, ọ ka mma iji aka aka gị mee ha site na ọnụ ala, ma ọ bụ ihe bara uru. Ciment na mmiri bụ naanị ihe ị chọrọ. Ya mere, na klas anyi, ị ga-amụta otú ị ga-esi chọọ ogige maka ogige.
abụọ containers nke dị iche iche diameters;
wax ma obu akwukwo nri.
Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịme mmanụ ma ọ bụ gbanye ụlọ dị n'ime nke akpa buru ibu na elu nke obere akpa. Ebipụ ya na plastic tube atọ dị mita ise n'ogologo, nke a ga-eji maka mmiri mmiri . Kwadebe ihe a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ọ acha, ọ bụ oge ịgbakwunye ụcha na ngwọta.
N'ime nnukwu akpa, gbanye ihe nkwụnye abụọ-centimita. Tinye akwa ma chere ruo mgbe ha "jide". Tinye n'ime obere akpa buru ibu. O kwesịrị ịgha ụgha na tubes. Mgbe ahụ jiri nwayọọ jupụta ihe ngwọta ahụ na spatula n'etiti nnukwu ihe ntanetị.
Mgbe awa iri abụọ na anọ gasịrị, mgbe ciment ahụ siri ike, jiri nlezianya wepụ obere akpa ahụ ma fesa mmiri ahụ mmiri kpọnwụrụ na mmiri, n'enweghị iwepu ya na nnukwu akpa. Debe ihe owuwu ahụ na ihe nkiri ma dọọ ya mmiri ruo otu izu ka ciment ahụ na-aṅụ mmiri mgbe niile. Mgbe ụbọchị asaa gachara, a pụrụ iji nwayọọ kpoo ite ite a na-esi na nnukwu akpa. Ọ na-anọgide na-akụ osisi na-amasịkarị n'ọkwá a na-achọ mma ma jiri ogige chọọ ya mma.
A na-eji ihe ntanetị nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche dị iche iche na-eji usoro yiri nke a mee ihe ngosi nke ogige osisi ubi. Ihe nkedo nke ciment na-adighi nma, nke di iche na nke di n'ime. Dịka ọmụmaatụ, site na ịcha otu pita PET, wụsa ihe ngwọta n'ime ya na ịtinye iko nwere ike ịchọta, ị ga-enweta ite na-adịgide adịgide.
Tank nke sweets
Ebe nchekwa Scrapbooking maka akwụkwọ ụmụaka
Ejiji aka nke aka gị
Envelopu afọ ọhụrụ nke aka gị
Mgbaaka eji aka aka eme
Ejiri aka gị na-ekpuchi akpụkpọ ahụ
Foto maka ime ya aka aka
Ịkwado okooko osisi aka aka
Poliomyelitis: ịgba ọgwụ mgbochi - nsogbu
Egwuregwu Ụmụ nwanyị 2013
Nri maka osikapa
Akpụkpọ anụ Sheepskin nke nwa atụrụ Tuscan
Pasta na shrimps na creamy ihendori
Iwu nke egwuregwu nke zoo ma chọọ
Esi ewepu echiche ọjọọ - ndụmọdụ nke ọkà n'akparamàgwà mmadụ
Osisi mkpụrụ osisi na-acha odo odo n'oge mgbụsị akwụkwọ
Kedu otu esi ehicha ihe egwuregwu?
Fettuccine na shrimps
Nwa pusi nwere anya anya - gini ka ime?
Mama, onye na-ejiji uwe nwa ya na nri na okooko osisi ghọrọ Instagram kpakpando
Ịcha na anya
Nkpu a na-eji akwụkwọ-mache